Ogaden News Agency (ONA) – Munaasabad Lagu Xusayey sanadguuradii Warbaahinta Ogaden24.com iyo Maalinta Xoriyada Saxaafada Aduunka Oo Maanta lagu Qabtay Nairobi
Munaasabad Lagu Xusayey sanadguuradii Warbaahinta Ogaden24.com iyo Maalinta Xoriyada Saxaafada Aduunka Oo Maanta lagu Qabtay Nairobi
Maanta ay oo taariikhdu ahayd 03 May 2015 waxaa lagu qabtay magaalada Nairobi laba xafladood oo ay soo agaasintay warbaahinta Ogaden24.com kuwaasi oo kala ahaa maalinta xoriyadda saxaafada aduunka iyo sanadguuradii 3aad ee kasoo wareegtay aasaaskii warbaahinta Ogaaden24.com.
Munaasabadan oo aysi wayn usoo agaasinta warbaahitna Ogaden24.com ayaa waxaa kasoo qayb galay dadwayne farabadan masuuliyiin kamid ah jwxo,masuuliyiin kenyan ah iyo xubno matalayey warbaahinta Soomaaliyeed.
Munaasabadda ayaa waxaa khudbad aad uqiimabadan kasoo jeediyey agaasimaha warbaarhinta Ogaden24.com taasi oo taabanaysay guud ahaan warbaahitna aduunka gaar ahaan tan Ogaadeeniya..
Khudbadii uu agaasimaha warbaahinta Ogaaden24.com kajeediyey munaasabada hoos ka akhrisa
Mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf ii ah inaan maanta idin kala qayb galo munaasabadan Qiimaha badan ee xuska maalinta saxaafada aduunka oo laga xusayo dacalada aduunka.
Anoo ka faa’iidaysanaya Fursadan waxaan jeclahay inaan Hambalyo dhaho dhamaan mihnadlayaasha saxaafadeed ee Afka Soomaaliga kuhadla, waxaana leeyahay halkiinaa kasii wada dadaalka muuqda ee aad u haysan dadkiina siina Laba jibaara Hawlaha saxaafadeed idinka oo shaqadiina ku dabaqaya shuruucda iyo xeerka saxaafadeed ee caalamiga ah kan dal iyo kan Heer Deegaanba.
Mudanayaal iyo marwooyin Dunida aynu maanta Joogno saxaafadu waxay safka hore kaga jirtaa Hogaaminta iyo Jahaynta bulshooyinka kala duwan ee caalamka kunool, mudo haatan laga Joogo 50-sano saxaafadu waxay ahayd Ashuun ku adin, waxayna Gacanta ugu jirtay maamulada oo kolba sida ay doonaan u adeegsan jiray xumaan iyo samaanba, saxaafaduna waa Mindi Laba Afleh oo dhankii ladoono loo adeeg sado.
Waxaa biya kama dhibcaan ah in maanta saxaafada madaxabanaani ay awoodaha Hogaamineed ee Dunida kaga jirto kaalinta 3-aad waxaana kahoreeya kaliya awooda siyaasadeed iyo tan dhaqaale, waxayna saxaafadu noqotay awooda kaliya ee hal mar ah lagu Jaheeyo malaayiin ruux oo daafaha dunida ku kala nool, taasi oo muujinaysa inay kusii siqayso inay awoodii dhaqaale meesha kasaarto amaba ay baratan kula jirto.
Hadaba iyada oo maanta dunida ay Heerka marayso Hamoogaan inay Jiraan dalal iyo dawlado ay saxaafadu u tahay cadawga koobaad ee ay ladagaalankiisa wax walba kahor mariyaan, kuwaasi oo u dagsaday shuruuc iyo xeer ciqaabeedyo kala daran oo loogu talagalay in lagu cabudhiyo dareenka dadwaynaha iyo inay cabiraan aragtidooda, dalalkaasi waxaa safka Hore kaga Jira maamulka Itobiya oo kaalinta 2-aad kagalay 10-ka dal ee Dunida cadaadiska iyo ciqaabta ugu badan kuhaya saxaafada madaxa banana.
Hadaba Wadanka Ogadenia oo kuhoos Jira maamulka Dalkaasi Itobiya isaga waa kaxaaraan waana ka mamnuuc nooc kaste oo saxaafad ah, waxayna dadku u afduuban yihiin Hal idaacad oo maalinkii Hal saac hadasha iyo Tv-kusheeg ay dhowaan Woyanuhu kasamaysteen magaalada Jigjiga, Labadaasi Aalaadood waxay kujiraan 50-sano kahor halkii ay Joogeen saxaafada kale ee Dunidu, waxaa maamula Askari waxaa tifaftire ka ah Askari, wariyaha kahadlaan waa maxbuus u afduuban aqoontiisa saxaafadeed.
25-kii sano ee ugu dambaysay waxay ahaayeen sanadihii ugu badnaa ee kobaca iyo koritaanka saxaafadu uu gaadhay Heerkii ugu sareeyay, Xoriyatul Qawlkuna waxaa uu noqday Hal beega lagu cabiro Dawlad wanaaga iyo Hufnaanta hanaanka siyaasiga ah, taa caksigeeda 25-kii sano ee u dambaysay dadka Ogadeeniya waxay u ahaayeen sanadihii ugu darnaa ee ay lasoo Gudboonaadeen cadaadiska iyo ciqaab wadareedka joogtada ahi, Kumanaan muwaadin oo aan wax dambi ah galin ayaa laxasuuqay, kumanaan kun oo kale ayaa ilaa iyo hada xabsiyada ugu jira, boqolaal kun oo kalana way barakaceen, waxa kaliya ee dadkaasi ay eedeena waa inay cabireen aragtidooda six or ah.
Xad Gudubyada Itoobiya ay kuhayso Wadanka Ogaadenia
Ogaadenia waxaa kajira Gumaysi nooca ugu xun ee ah isku dul noolaanshaha
Itoobiya waxay si Joogta ah uga Fulisaa xasuuq wadareed, Xadhig joogta ah, Kufsi, iyo Barakicin.
Shacabka Ogaadenia mahaystaan mana Helaan waxyaabaha Nolosha Aasaasiga u ah, sida Biyo Nadiifa, Caafimaad, waxbarasho, iyo adeega Korontada.
Ogaadenia waxaa ka mamnuuc ah Hay’adaha Gargaarka ee dadka kutabaaloobay xad Gudubka saacidayn lahaa, sidoo kale waxaa laga xaaraantinimeeyay saxaafada noocay dooniba ha ahaatee.
Tacadiyada iyo Gabood falada Bini’aadminimada kadhanka ah waxay kamid yihiin nolol maalmeedka caadiga ah ee shacabka Ogadenia, waxaana Ogaadenia si Joogta ah uga dhaca Dambiyo Dagaal.
Waxaan ugu baaqaynaa Qaramada midoobay, Beesha caalamka, iyo Dawladaha aduunka ee daneeya sinaanta iyo Dimuquraadiyadu inay kawaan Toobaan ku dhawrida Itobiya ay kudhawrayaan xadgudubka Qaawan ee ay kuhayso bulshada kuhoos Dulman maamulkeeda, kulana xisaabtamaan fal dambiyeedyada ay sida Joogtada ah u galayso.
Waa in Ogaadenia loodira Gudi baadhis iyo xaqiiq raadin ah oo madax banana si banaanka loosoo dhigo Xasuuq wadareedka iyo xad Gudubyada kale ee kadhaca dalkaasi.
Waa in Maxkamada caalamiga ah ee dambiyada Dagaalka lasoo taagaa dambiilayaasha caadaystay xasuuqa iyo ka xad Gudubka maxasta iyo maatida Biri magaydada ah, si looga abaal mariyo dambiyada ay galeen.
Waa in Hay’adaha xuquuqul Insaanku ay si dhab ah ugu kuurgalaan xaalada Ogadenia soona bandhigaan xaqiiqooyinka Qarsoon ee kajira.
Waa in Ogaadeenia sida ugu dhakhsaha badan loogu fasaxo Hay’adaha Gargaarka iyo saxaafada madaxa banana, waana in Itobiya cadaadis lagu saaro sidii arintaasi ay u Hirgali lahayd.
Digniin ku wajahan Saxaafada Soomaalida:
Saxaafada madaxa banana ee Soomaalidu waa in ayna katagin Soomaalinimada
Waxaan uga digaynaa saxaafada Soomaalida Fidinta Dacaayadaha Gumaysiga iyo ka been sheegida xaqiiqada dhabta ah ee Ogadenia kajirta.
Hadii ay saxaafada Soomaalidu Halkii ay uga Hiilin lahaayeen walaalahood ay Taageerada Gumaysiga u badheedhaan iyaga ayaa masuul kanoqon doona wixii dhibaata ah ee kazoo Gaadha, shacabka Soomaalida Ogaadenia wuxuu ula macaamili doonaa sida cadawga ay u adeegayaan.